त्यो दिन सबिताको परिवार माइतिसँग आखिर किन संपर्कमा आएका थिएनन ? (भिडियो हेर्नुहोस) – Classic Khabar
त्यो दिन सबिताको परिवार माइतिसँग आखिर किन संपर्कमा आएका थिएनन ? (भिडियो हेर्नुहोस)
June 13, 2021 213
बैसाख ४ गतेको घ’टना हो यो। चितवन सारधानगर स्थित महानगरीय प्रहरीले काठमान्डौमा रहेको सबिता धिताल (भण्डारी)को माईतिलाई सम्पर्क गर्छ र सबिता धितालले केहि घण्टा अगाडि दे ह’त्या ग गरेको र मृ’तकको स’व अस्पताल पुर्याइसकेकोले सकेसम्म छिटो सम्बन्धित अस्पतालमा आइ पुग्न आग्रह गर्छ। यता सविताको माईति परिवार स्तब्ध बन्छ।माईति पक्षले सबिताको परिवारलाई सम्पर्क गर्न कोसिस गर्छ तर सम्पर्कमा परिवार भित्रका सदस्य कोहि आउदैनन।
अन्तत: परिवार नजिकका आफन्तसंग सम्पर्क हुन्छ र सबिताको माईतिले कल्पना गर्नसम्म नसक्ने घ’टनालाई स्वी कार्न बा ध्य हुन्छ। केहि घण्टा भित्रै माईति पक्ष सम्बन्धित अस्पता पुग्छ जहा सबिताको सब पो’ष्ट म्याटमका निम्ति अस्पतालमा पुर्याइएको हुन्छ। सबिताको माईति पक्षका अनुसार, जहाँ प्र’हरीले उनीहरुलाई सबको फोटो खिच्न्न मात्र हैन, राम्रोसंग अन्तिम पल्ट हेर्न समेत दिएन भन्दै आमा रु’नु भयो।
Next१८ बर्षकि नर्स छोरीलाई सकेको हो भन्दै बुबा आए मिडियामा ,४ जन केटाहरले बोकेर लगेछन, कसरि भिज्यो बिस्तार ? (भिडियो)
आफैले ओलिलाई फोन गरेर बाले मलाई फोन गर्नु भयो भनेर ट्रोल बनेकी करिश्माले अन्तत भेटिन केपी ओलिलाई (भिडियो सहित)